टर्म पेपर लेख्दा सामान्य गल्तीहरू - Victor Mochere
by मोली एलन्स
टर्म पेपर लेख्दा यसको उतार-चढावहरू छन् जसमा विद्यार्थीहरू तनावपूर्ण र निराश हुन्छन्। टर्म पेपर लेख्नको लागि तपाईलाई ध्यान, धैर्यता, लगनशीलता र 15-20 दिन चाहिन्छ, र केहि महिनाको लागि कामको विषयमा पूर्ण रूपमा डुब्न। जीवनको आधुनिक लयले प्रायः विद्यार्थीलाई एउटा कार्यमा3हप्ता खर्च गर्न अनुमति दिँदैन। पाठ्यक्रम चाँडै पास गर्ने चाहनाले त्रुटिहरू निम्त्याउँछ, जसको कारण शिक्षकले यसलाई संशोधनको लागि फिर्ता गर्दछ।
यसले चीजहरू सजिलो बनाउन लेखन प्रक्रियाको क्रममा गरिएका सामान्य गल्तीहरूको समीक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको पेपर सुरु गर्नु अघि यी सम्भावित हानिहरु को बारे मा सचेत हुनु को लागी तपाई लाई सफलतापूर्वक उनिहरु लाई जोगिन मद्दत मा एक लामो बाटो जान सक्छ। यसले ठूलो मात्रामा तनाव र निराशा हटाउनेछ। त्यसपछि तपाईले एउटा पेपर लेख्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईको प्रशिक्षकलाई प्रभाव पार्छ र तपाईले गर्व गर्नुहुनेछ।
टर्म पेपर लेख्दा बेवास्ता गर्न यहाँ सामान्य गल्तीहरू छन्।
1. एक अप्रासंगिक विषय छनोट गर्दै
२. अध्ययनको वर्णनात्मक प्रकृति
3. विषयबाट विचलनहरू
4. पुरानो जानकारी को उपयोग
5. प्रस्तुति शैली को गलत छनोट
७. साहित्यिक चोरीको दुरुपयोग
8. गलत डिजाइन
9. कामका भागहरूको असमानता
ध्यानपूर्वक पाठ्यक्रमको विषय छनोट गर्नुहोस्। परिचयको अनिवार्य भाग यसको प्रासंगिकताको प्रमाण हो।
विषय तपाईंको लागि स्पष्ट र रोचक हुनुपर्छ। सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दा, यसको अध्ययनको कमी, व्यावहारिक महत्त्व, आधुनिक अनुसन्धान विधिको उदय वा नयाँ जानकारीमा ध्यान दिनुपर्छ। तर्कहरू स्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा बनाउनुहोस् र अस्पष्ट निर्णयहरूबाट बच्न प्रयास गर्नुहोस्। औचित्यले पानाको आधा भाग लिनुपर्दछ।
पाठ्यक्रम कार्य समस्या समाधान गर्न उद्देश्य हो। यो प्रकृतिमा विश्लेषणात्मक हुनुपर्छ र तपाईंको तार्किक सोच कौशल देखाउनुपर्दछ। कल्पनाको उडान, उद्देश्यको कमी, भागहरूको असंगतता र कलात्मक विवरणहरू यहाँ अस्वीकार्य छन्।
म्यानुअलका सिफारिसहरू अध्ययन गर्नुहोस् र शिक्षकसँग परामर्श गर्नुहोस्। कामको संरचना बारे सोच्नुहोस् र उपयुक्त अनुसन्धान विधिहरू चयन गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणको लागि विषयको गहिरो बुझाइ आवश्यक छ र पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग हो। यसलाई अन्य सैद्धान्तिक र तार्किक-सैद्धान्तिक विधिहरूसँग जोड्नुहोस्। यदि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ कि तपाइँ विषय बुझ्न सक्नुहुन्न भने, यो जानकारी स्टुडियोमा सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ।
यदि कुनै विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको विषय र यसको उद्देश्य बुझ्दैन भने, उसले तार्किक रणनीति अनुसरण गर्दैन र आफूलाई उपयुक्त लाग्ने सबै कुरा लेख्छ। यसले अत्याधिक विवरण, अप्रमाणित तथ्यहरूको अन्धा पुन:लेखन र छनौट गरिएको विषयबाट विचलन निम्त्याउँछ।
तपाईंको कामको अर्थको बारेमा शिक्षकलाई अग्रिम सोध्नुहोस्। पाठ्यक्रमको विषय बुझ्न र तार्किक रूपमा यसको संरचना निर्माण गर्न धैर्य गर्नुहोस्।
यो गल्तीको कारण, तपाईंको काम प्रासंगिकता गुमाउँछ।
पछिल्लो ३-५ वर्षमा प्रकाशित भएका नयाँ स्रोतहरूबाट डाटा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
अनाड़ी मजाकिया वाक्यहरू, लामो अनुच्छेदहरू र जटिल शैक्षिक मोडहरूले पर्यवेक्षकमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
पहुँचयोग्य तरिकामा जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। उधारिएको निर्णयहरू, सर्वनामहरूको एक बहुतायत र भ्रामक अभिव्यक्तिहरूबाट बच्नुहोस्। तपाइँ शिक्षक संग प्रस्तुतीकरण को सूक्ष्मताहरु लाई पहिले नै छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।
जब एक विद्यार्थीले छोटो समयमा पाठ्यक्रम लेख्छ, त्यहाँ व्याकरण, वाक्यरचना, तार्किक र अन्य त्रुटिहरू जाँच गर्ने समय हुँदैन। तिनीहरूको उपस्थितिले स्कोर कम गर्न धम्की दिन्छ।
साक्षरता सेवाहरू मार्फत समाप्त पाठ्यक्रम कार्य छोड्नुहोस् वा एक प्रूफरीडर भाडामा लिनुहोस् वा गल्तीहरू जाँच गर्न आफ्नो साथीलाई सोध्नुहोस्। अनुवादित स्रोतहरूबाट शब्दहरूको हिज्जे जाँच गर्नुहोस्। इन्टरनेटमा धेरै टाइपो र अन्य मोतीहरू छन्। पाठ्यक्रम कार्यको लागतमा अर्डर गर्दा, परीक्षण पहिले नै समावेश गरिएको छ।
शिक्षकले याद गर्नेछन् कि तपाईंले आफ्नो काम अन्य व्यक्तिहरूको वैज्ञानिक कार्यहरूको टुक्राबाट कम्पाइल गर्नुभएको छ वा कसैको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा विनियोजन गर्नुभएको छ।
साहित्यिक चोरी सामग्री संग काम गर्न असक्षमता को संकेत गर्दछ। पाठ्यक्रम कार्य एक लेखकको काम हो र यो अद्वितीय हुनुपर्छ। फेला परेको जानकारीलाई पुन: कार्य गर्नुहोस् (पुनः लेख्नुहोस्) र आफ्नै निष्कर्षहरू बनाउनुहोस्।
डिजाइन मापदण्ड एक वर्ष धेरै पटक परिवर्तन हुन सक्छ। फन्ट साइज, परिचय र समापनको सही लेखन, पङ्क्तिबद्धता, कार्यका भागहरूको क्रम, सन्दर्भहरूको दर्ता र साहित्यको सूची - उच्च विद्यालयका सबै इच्छाहरू जान्न र विचार गर्न आवश्यक छ।
सबै डिजाइन आवश्यकताहरूको बारेमा शिक्षकलाई सोध्नुहोस्। अन्यथा, तपाइँ पूरा गर्न को लागी एक पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न जोखिम।
प्राय: विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रमको एक भागमा धेरै सामग्रीहरू भेट्टाउँछन् र अर्कोमा धेरै थोरै। फलस्वरूप, केही खण्डहरू अत्यधिक विस्तृत छन् र केही वस्तुतः अज्ञात छन्। यस्तो काम योग्य हुने सम्भावना छैन।
पाठ्यक्रम योजना र लेखन मापदण्डहरू पालना गर्नुहोस्। भागहरू समानुपातिक बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। अनावश्यक शब्दहरू र वाक्यहरू हटाएर सबैभन्दा ठूलो खण्डहरू छोटो पार्नुहोस्। यसले सेवाहरूलाई "मौखिक फोहोर" छुट्याउन मद्दत गर्नेछ।
समयसीमा भन्दा ढिलो पेश भएको काम शिक्षकले पहिले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ ।
पाठ्यक्रम योजना बनाउनुहोस् र यसलाई अडिग गर्नुहोस्। प्रूफरीडिङ र सम्पादनको लागि समय दिनुहोस्। अन्तिम रातको लागि पाठ्यक्रम लेख्न नछोड्नुहोस्।
अब तपाईलाई सबैभन्दा सामान्य विद्यार्थी गल्तीहरू बारे थाहा छ र तिनीहरूलाई बच्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम कार्यमा ध्यान, लगनशीलता र विषय बुझ्ने इच्छा चाहिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेद पछि राम्रो जीवन तर्फ पाइला
एयर चार्टर द्वारा भ्रमण गर्नका लागि उत्तम ठाउँहरू